रुन, हाँस्न र रमाउन सिकेकै आत्मपरक निबन्धबाट हो
युवराज नयाँघरे नेपाली निबन्धमा परिचित नाम हो । दुई दशकदेखि मौलिक निबन्ध र नियात्रा लेखनमा सक्रिय नयाँघरे घुमफिरका सौखिन हुन् । घुमफिरकै क्रममा बर्मा (म्यानमार) पुगेको घटनालाई जोडेर उनले नयाँ नियात्रासंग्रह ‘तनक्खा’ प्रकाशन गरेका छन् ।
साहित्यको एउटै विधामा २० वर्षदेखि अनवरत साधनारत निबन्धकार नयाँघरेका १८ वटा मौलिक निबन्धसंग्रह प्रकाशित छन् । नेपाली निबन्ध लेखनका आरोह–अवरोह र नयाँघरेको नयाँ किताब ‘तनक्खा’माथि केन्द्रित रहेर शिलापत्रका लागि निर्भीकजंग रायमाझीले गरेको कुराकानी:
तपाईंका निबन्धमा यात्रावृत्तान्त बढी पाइन्छ, यस हिसाबले हेर्दा तपाईं निबन्धकारभन्दा यात्राकार बढी हो ?
पछिल्लो समय म अलि बढी नियात्रामा केन्द्रित रहें । यसैले पाठकले मेरा नियात्रा बढी पाए । फुटकर रूपमा पनि नियात्रा नै बढी प्रकाशित भए । तर, म आफूलाई निबन्धकार मान्छु । मेरा ११ वटा आत्मपरक निबन्ध प्रकाशित छन् ।
फेरि मलाई के लाग्छ भने निबन्धकै एक हाँगो हो नियात्रा । नियात्रामा बाह्य जगत्को चित्रण हुन्छ भने निबन्धमा बौद्धिक शालीनता हुन्छ । यसैले मीठो गफगाफ हो निबन्ध । केही समयदेखि मैले निबन्ध दिन नसकेको हो ।
तर, निबन्ध लेखनमा आत्मपरक शैलीसँग मेरो बेजोड प्रेम छ । मैले रुन सिकेको, हाँस्न सिकेको र रमाउन सिकेको आत्मपरक निबन्धमा नै हो । यसैले मलाई बढी सम्मान आत्मपरक र मौलिक निबन्धमा नै छ ।
५० को दशकपछि निबन्ध विधा शिथिल भएको हो ?
अहिले प्रविधिको विकासले समाज र पाठक सरलतातिर गएका छन् । अहिलेको मानिस बहस र चिन्तनमा छैन । अहिलेको पत्रकारिता हेर्नुस्, समाचार र विचार (न्यूज र भ्यूज) सँगै आउँछ । आजको लेखनमा पनि त्यो पाइन्छ ।
अर्थात् जे पनि छिटोछरितो र तुरुन्त चाहिने । अहिलेको मानिस बोझिलो हुन चाहँदैन । यसैले निबन्ध केही शिथिल भएको हो । गहन चिन्तन र माझिएको लेखन कम लेखिएका छन् । यद्यपि निबन्धलाई रुचिकर नै नभएको भन्न मिल्दैन तर रुचि कम भएको हो ।
तपाईंको दृष्टिकोणमा निबन्ध र नियात्रामा के फरक छ ?
निबन्ध लेख्दा आफूलाई मनको ध्यानमा लानुपर्छ । मनको चालमा अक्षरहरू चलाउनुपर्छ । ढुकढुकीसँग चल्नुपर्छ । तर, नियात्रा लेख्दाचाहिँ अनुभूतिको कम्पनमा हिँड्नुपर्छ । यो नितान्त फरक छ ।
विधागत रूपमा एकै भए पनि यी दुईमा केही फरक छ । यी दुईको स्वादमा फरक छ । यस हिसाबले हेर्दा के भन्न सकिन्छ भने यी दुई सौतेनी आमाका छोराछोरीजस्ता हुन् ।
यसर्थ मेरो पहिचान निबन्धकार नै हो । नियात्रा त निकै पछि लेख्न थालेको हुँ । डेढ दशक मात्र भयो, नियात्रामा दौडिन थालेको म । लोकजीवन, भूगोल र जनजीवन बुझ्न म नियात्रा लेख्छु ।
यसअघि प्रकाशित नियात्रा र तनक्खाबीच के फरक छ ?
‘तनक्खा’मा गैरआख्यानको स्वाद छ । अनुभूतिको तीव्रता छ । इतिहासको नयाँ आयाम छ । यसमा कोरा वर्णन मात्र गरिएको छैन ।
बर्माबाट नेपाली लखेटिएको कुरा साहित्यमा छ । यसै विषयलाई लिएर इन्द्रबहादुर राईले ‘जयामाया आफू मात्र लिखापानी आइपुगी’ लेखे । तर, नेपाली लखेटिएको होइन रहेछ । त्यसभित्रको कहानी अर्कै छ ।
हामीले पो सोचविचार नै नगरी लेखेका रहेछौं । यसैले मलाई के लाग्छ भने हिजोको साहित्य स्याल हेराइजस्तो भएछ । हुनुपर्ने सिंहावलोकन हो । दश पाइला हिँडेर मात्र पछाडि हेर्ने ।
नेपालबाट रोजगारीका लागि विदेश जाने परम्परा छ । त्यस्तै बर्माका युवा पनि यसकै सिको गरेर थाइल्याण्ड, अस्ट्रेलिया जाँदा रहेछन् । यसैले मैलै ‘तनक्खामा अर्को देशका नेपालीबारे लेखेको छु ।
उनीहरूको संस्कृति लेखेको छु, जसले नेपाली संस्कृति मान्छन् । २ सय वर्ष उनीहरूले आफ्नो संस्कृति कसरी बचाए होलान् ? कसरी आफूलाई आफ्नो मौलिकतामा टिकाइरहन सके ? यी कुरा लेखको छु । तसर्थ ‘तनक्खा’मा सोझो बयान मात्र छैन ।
तपाईं निबन्धमा मात्रै केन्द्रित रहनुभयो । आफ्नो जीवनकालमा मन परेका निबन्धकार र उनीहरूको विशेषता बताइदिनुस् न ?
ढाँट्नु हुन्न, मैले बाहिर (अंग्रेजी) कम पढेको छु । नेपाली र हिन्दी बढी पढेको छु । नेपालमा तारानाथ शर्माको एउटा उचाइ छ निबन्धमा । भाषाको महक शर्माको निबन्धमा अद्भूत नै छ । यस्तै, डा. माधवप्रपाद पोखरेलको आफ्नै विशेषता छ ।
सुधा त्रिपाठीका केही रचना उत्कृष्ट छन् तर प्रशासनिक व्यक्तित्वले उहाँलाई छोप्यो । मेरो अनुभवमा चाहिँ पढ्नैपर्ने अर्का निबन्धकार हुन् धच गोतामे । उनी आख्यानकार मात्र होइनन्, बेजोड संस्मरणकार र यात्राकार हुन् । यी स्रष्टाका निबन्ध पढ्दा थाहा हुन्छ नेपाली निबन्धको वैभव ।
समकालीन निबन्ध लेखन र साहित्यिक धारणामाथि तपाईको मत के छ ?
अहिले निबन्धकार जटिल मोडमा छन् । लेखन प्रविधिसँग जुध्नुपरेको छ । भाइबर, युट्युब, स्काइप र फेसबुकले मानिसको समय खाएको छ । लेखकलाई पुस्तबाट बाहिर जाऊ भनेको छ ।
ज्ञान, सीप र चेतनाको सुन्दरता जोगाउन लेखकले एउटा कुनामा बसेर अध्ययन मनन गर्नुपरेको छ । फेरि यसरी एक्लै बस्दा पनि समयको गतिबाट छुटिने डर हुन्छ । दुवै गतिलाई सँगसँगै लैजान कठिन छ । तर, प्रविधि र ज्ञानलाई एकैसाथ समात्न सक्नुपर्छ । साहित्यमा नयाँनयाँ धार वा आयाम आए पनि आफ्नो मौलिकता आफैं बनाउन सक्नुपर्छ ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, कात्तिक २, २०७६, ०९:१०:००
कोरोना संक्रमित बलिउड गायिकाको यसरी भइरहेको छ उपचार